Dhakhtarka Indhaha ee aan arkin xiddigaha - BBC News Somali
Image caption Dhakhtar Andrew Bastawrous
Sannado badan Dr Andrew Bastawrous si fiican uma uusan arkaynin caleenta geedaha saaran iyo xiddigaha.
Macalimiinta waxay ku oran jireen "waxaa tahay qof aan waxbo qabsan karin", xitaa mararka qaarkood kama uusan qayb geli jirin cayaaraha kubadda cagta.
Andrew markii uu gaaray da'da 12, hooyadiis waxay u qaaday isbitaal si baaritanno lagu soo sameeyo indhihiisa.
Andrew hadda waa dhakhtar dhanka indhaha ah oo abaal marin ku guuulaystay, wuxuuna hayaa qorshe ah inuu sameeyo aalad casri ah oo laga heli doono telefoonada casriga ah, si malaayiin carruur ah oo aragga dhibaato ku qabo ay uga faa'idaystaan.
Ku dhawaad 12 milyan qof oo ku dhaqan dunida ayaa dhibaatada dhanka aragga qaba, kuwaasoo u baahan ookiyaale ka caawiya aragga.
Dadka qaar ma awoodaan inay helaan dawooyin dhanka indhaha taaso saamayn ku yeelata waxbarashada carruurta.
Deegaannada miyiga ee ku yaalla Kenya, tusaale ahaan halkii dhakhtar waxaa kusoo aadaya hal milyan oo qof oo ka xanuunsan indhaha. Dalka Mareykanka halkii dhakhtar ee indhaha waxaa ku soo hagaagaysa 15,800 qof.
Sannadkii 2011-kii ilaa hadda Dr Andrew wuxuu yahay dhakhtar ku takhasusay xannuunada indhaha, wuxuuna ka howlgalaa dalka Ingriiska. Wuxuu magaalada Kitale ee dalka Kenya ka billaabay daraasad dhanka cudurada indhaha ku dhaca ah. Daraasaddan waxay qayb ka tahay waxbarashadiisa jaamacadeed ee PhD.
Wuxuu soo qaatay qalabka lagu daweeyo indhaha oo ku kacay qiiime dhan £100,000 si uu isugu dayo inuu sameeyo 100 ka mid ah xarumo wax looga qabto xannuunada indhaha ku dhaca, balse wuxuu ogaaday in tallaabadan aysan shaqayn karin maadaama ay koronto la'aan jirto, waddooyinkana aysan hagaagsanayn.
Lahaanshaha sawirka Peek Vision
Image caption Qalabka lagu baaro xannuunka ku dhaca indhaha
Markii dambe wuxuu arkay in dadka deegaanka ay haystaan isgaarsiin wanaagsan oo boqolkiiba 80 ah, iyo inay haystaan telefoonada gacanta. wuxuuna billaabay fikradda ah inuu keeno teleefoon la yiraahdo Peek.
Peek waa teleefoon casri ah oo lagu shubay barnaamijyo lagu baarayo xannuunada indhaha ku dhaca.
Macalimiinta oo dhakhtar indhaha noqon kara
Dr Andrew ayaa ku rajo wayn in telefoonka Peek ay isticmaali doonaan dadka aanan ku takhasusin xannuunada indhaha, siiba deegaanada uusan dhakhtar joogin, wuxuuna billaabay fikrad lagu tababarayo macalimiinta si ay u noqdaan dhakhaatiir dhanka indhaha ah.
Hadda tijaabada telefoonka Peek waxay muujinaysaa in loo isticmaali karo baaritaannada Indhaha, si carruurta dhigata iskuullada dhibaatada aragga ay lasoo deristay loo siiyo ookiyaalaha ay u baahan yihiin.
Sida uu u shaqeeyo Peek
Carrurta waxaa la tusayaa shaashadda telefoonka oo uu ku qoran yahay xarafka 'E' oo qaabab kala duwan loo qoray.
Canugga waxaa wejigiisa loo jeedinayaa jihada uu xarafka u jeedo.
Macallinka oo aanan arkin shaashadda teleefoonka ayaa dhinac u ged-geddinaya.
Wuxuuna ogaanaya heerka aragga indhaha canugga lagu tijaabiyay telefoonka.
Image caption Telefooonka Peek ayaa loo isticmaala baaritannada aragga indhaha carruurta
Dr Andrew iyo koox baarayaal caafimaad ah oo ka socda iskuulka fayo-dhowrka iyo dawooyinka ee London ayaa toddobaad ku qaatay inay tababar siiyaan 25 macallin oo ka socday 50 iskuul oo ku yaalla deegannada miyiga ee Kenya, si ay u isticmaalaan teknooloojiyadda baaritaannada loogu samaynayo xannuunada indhaha.
Inta badan waxaa lagu tijaabiyay carruur badan, waxaana la ogaaday inuu waxtar leeyahay.
Hillary Rono oo ah dhakhtar dhanka indhaha oo fadhiggiisu yahay dalka Kenya, isla markaasna horkacaya daraasaddan, wuxuu sheegay in teknooloojiyaddan ay dadka fursad u siinayso inay ogaadaan xanuunnada ku dhaca indhaha carruurta si ay dhakhtar ula xiriiriyaan marka ay natiijada u soo baxdo.
Wuxuu yiri "waxaan ka mid ahay boqolka dhakhtar ee ku takhasusay xannuunada indhaha ku dhaca, waxaana u xilsaaranahay deegaan ay ku nool yihiin 2 milyan oo qof, markaasi ma gaari karo qof kasto oo halkaasi degan"
Image caption Sawir muujinaya macalimiinta iyo carruurta oo isticmaalaya Teknooloojiyadda